तर, फोटो सेसनका लागि ड्रेस थिएन। देखाजाला। पहिले फोटो सेसनको समय त मिलाऔँ। नीरज भारीको सौजन्यले इराको फोटो सेसनको समय मिल्यो। इरालाई राजीवको स्टुडियोमा स् वागत गर्दा एउटा कुरोको
सम्झना भयो। मानिसहरू भन्थे, बुद्धि र सौन्दर्यको मेल हुँदैन। इरा चाहिँ यी दुवै तइभ्वको संगम थिइन्। राजीवको स्टुडियोमा तीन घन्टा बसिन् इरा। केही सुन्दर फोटो खिचियो। तर, कुनैपनि फोटो मिडपेजका लागि सुहाउने भएन।
फोटो सेसनपछि हिमालय होटलमा उनीसँगको वार्ता भने निकै जम्यो। भारतको लखनउ शहरमा जन्मिएर अमेरिका पढेकी इरा खुला विचारकी थिइन्। सेक्सदेखि सिडक्सनसम्मका सबै कलामा पारंगत। साहित्य मेलामा बंगाली लेखिका तसलिमा नसरिन आउने कुरा थियो। उनी आएको भए इराको भाउ घट्थ्यो भन्ने धेरै थिए। तसलिमा महँगी थिइन्। सबैकुरा फाइभ स्टार चाहिने उनलाई। इरामा त्यस्तो केही देखिएन। उनी सरल र लनसार थिइन्।
उपन्यासकारका रूपमा पनि इराले प्रतिनिधित्व गर्ने समाज र तसलिमाले प्रतिनिधित्व गर्ने समाज अलग अलग छन्। तसलिमा उदारवादी मुस्लिम समाजकी प्रतिनिधि हुन् भने इरा स्वतन्त्र समाजकी। संस्कारका हिसाबले पनि वेस्टर्नाइज्ड इराको विचारसँग बंगाली भावुकतामा बाँधिएकी तसलिमाको तुलनासम्म पनि हुन सक्दैनथ्यो। कस्तो हावादारी कुरा! तसलिमाले नेपाल आउँदा पासपोर्ट नै बिर्सिइन्। उनले भनिन् र सबैले पत्याए। वर्षौँदेखि विद्रोही लेखिकाका रूपमा युरोप र भारतमा शरणार्थीको जीवन बिताइरहेकी तसलिमाले पासपोर्ट बिर्सिनु उदेकलाग्दो कुरा थियो।
इराले पासपोर्ट मात्रै होइन, नेपालसँगै जोडिएको आफ्नो उत्तर प्रदेशलाई पनि बिर्सिएकी थिइनन्। लेखनका हिसाबले पनि तसलिमाको बंगाली भावुकतासँग नेपालीहरू त्यति रमाउन सक्दैनन्। शंकर र समरेश बसुजस् ता विख्यात बंगाली लेखकका कथा र उपन्यासको स्वाद लिइसकेको नेपालका अघिल्लो पुस्ताका साहित्यप्रेमीका लागि तसलिमाको लेखन रुचिकर नलाग्नु स्वाभाविक हो। भारतमा अंग्रेजी भाषामा संगठित
र व्यावसायिक लेखनको सुरुआत ७० को दशकदेखि मात्रै भएको हो। मुल्कराज आनन्द, खुशवन्त सिंह र आर के नारायणजस्ता विशिष्ट लेखकहरूले भारतमा अंग्रेजी लेखनको जड मजबुत तुल्याएका हुन्। प्रकाशन व्यवसाय फस्टाउन नसकेको त्यो जमानामा यी लेखकहरूले पाठकहरूको विशाल संसारमा पुग्न निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। त्यतिखेर आदिल जुस् सावालले पेन्गुइन बुक्स प्रकाशनबाट भारतीय लेखनको एन्थोलजी प्रकाशित गर्न सफलता पाएका थिए। आर्थिक उदारवादको प्रारम्भपछि भने भारत साहित्यको विश्व बजारको एक अंग नै बन्यो। ठूल्ठूला प्रकाशनहरू पुस्तकको व्यापार गर्न भारत छिरे।
इराको पुस् तालाई पुस्तकको आकर्षणमा तानेका हुन् चेतन भगतले। चेतन लेखनका मामिलामा अहिलेका ट्रेन्ड सेटर हुन्। उनले अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा उपन्यास लेखेका छन। ती तीनैवटै उपन्यासले प्रशस्त व्यावसायिक ख्याति कमाएका छन्। चेतनका उपन्यास साहित्यिक श्रेष्ठताका हिसाबले भलै उत्कृष्ट नहुन्, बजारका हिसाबले लेखक प्रकाशक दुवैथरीलाई मालामाल गराउने खालका छन्।
इरा यो कुरालाई स्वीकार गर्छिन्। उनको विचारमा, विदेशमा बसेका भारतीयहरू आफूलाई र आफनो संस्कृतिलाई अभिव्यक्त गर्न छट्पटाइरहेका छन्। उनीहरू पुस्तकका माध्यमले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूका लागि उपन्यास लेखन अभिव्यक्तिको बलियो माध्यम बनेको छ। यस कालका अधिकांश रोचक उपन्यासहरूको सेटिङ विदेशमा नै गरिएको पाइन्छ। भारतमा सेटिङ गरिएका पुस् तक पनि कुनै न कुनै बहानामा विदेशसम्म पुगेकै हुन्छन्। अहिले प्रकाशित फिक्सनका पुस्तकहरू पनि भारतीय सिनेमा जस्तै हुन्। यी वैको लक्ष विदेशमा रहेका भारतीय हुन्। उनीहरूको व्यापारको मुख्य विन्दु पनि यही हो।
आर्थिकबाहेक, यसको कारण नैतिक मर्यादामा रहेको भारतीय समाज पनि हुन सक्छ। विदेशमा बस्ने
लेखकहरू सेक्सलाई जति खुला लेख्न सक्छन्, भारतमा बस्ने लेखक त्यो हदसम्म जान हिच्किचाउँछन्।
लेखिका तथा पत्रकार शोभा डेलाई छाडेर समकालीन भारतीय लेखक कसैले पनि फड्को मार्ने साहस गरेका
छैनन्। किताब लेखेर खान, फेसन र मोजमज्जा गर्न पुग्छ त? 'पुग्दैन,' इरा भन्छिन्, 'अवस् था पहिलेको भन्दा सुध्रिएको छ। तर, सुविधाजनक जीवन बिताउन कुनै पनि लेखकले सम्पादन र व्यावसायिक लेखनको अतिरिक्त भारी बोक्नैपर्छ।' इरा पनि यही गर्छिन्। हरेक दिन मध्याह्न १२ बजेपछि नियमित लेखनमा जुट्ने इरा अहिलेको लेखनले विभिन्न देश र महादेशका मानिसलाई जोडेको बताउँछिन्। उनको विचारमा अहिलेको साहित्य भनेको मानिसको कथा हो।